Depioté Rakotoarimanana Joelisoa : tsy voatendry CT fa manohana ireo namany hatrany ! – MyDago.com aime Madagascar
Depioté Rakotoarimanana Joelisoa : tsy voatendry CT fa manohana ireo namany hatrany !
Solombavambahoaka teo aloha tsy tafiditra (adino ny nampiditra ny anarany?) ho mpikambana ao anatin’ny Kongresin’ny Tetezamita(CT) , dia Rakotoarimanana Joelisoa, voafidy tany Betafo no nanaiky niresaka taminay etoana.
MyDago.com : Inona no azonao ambara ny dianao tany ambanivohitra tany ?
Rakotoarimanana Joelisoa: Ny azo resahana dia manjaka ny tsy fandriam-pahalemana any ary tena mampijaly ny vahoaka, ka tsy ahafahana miaina mihitsy, na eo amin’ny fiompiana na fambolena izany. Eo ihany koa ny ady amin’ny fisolokiana ny tanim-bahoaka . Ny tena mampijaly dia tsy misy mpiaro ny vahoaka .Tsy hitany intsony izay itarainana. Betafo moa dia niaina tanteraka ny momba ny resaka ronono nefa amin’izao dia mahatsiaro sahirana ny vahoaka fa tsy misy mandray intsony ny ronono .
MyDago.com : Eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, misy aretina toy ny raboka mamely mafy amin’iny faritra Betafo iny?
Rakotoarimanana Joelisoa: Mandry tsy lavo loha ny mponina noho ny tsy filaminan’ny sehatra politika isan-karazany,ka tsy afaka manampy amin’ny fampandrosoana ny tanàna.Na eo amin’ ny fahasalamana na fampianarana koa, satria ny ministera dia miovaova ka tsy maharaka ny fahasahiranana manjo ny vahoaka .
MyDago.com : Amin’ny maha ankolafy Ravalomanana anao, ny fijerinao ny politika ankapobeny?
Rakotoarimanana Joelisoa : Tsy voatery ho tonga lafatra akory ny zavatra rehetra.Ny tokony hanatsarana io tondrozotra io mba hivoahana ny krizy no tokony himasoana.Tena mijaly loatra ny vahoaka. Izahay ao anatin’ ny ankolafy Ravalomanana dia milaza hoe : misy ny azo iasana sy itakiana ny tanjona , na ny hevitra sy ny tetik’ady tokony hatao amin’ny fanaovana politika eto Madagasikara sy hamahana izao krizy izao.Porofon’ izany dia miditra ao anaty governemanta sy CT sy CST ny ankolafy Ravalomanan. Eo no anentanana ny vahoaka sy ireo tafiditra ao mba hitady ny hevitra rehetra.Ny idirana ao moa dia ny hampanjakana ny hevitra rehetra hahafahana manatanteraka ny politikan’ny tena .
Ny faharoa kosa dia fanentanana vahoaka mba hanohana ireo namana hiasa sy hanantanterahana izany zava-kendrena izany. Izayno tanjona fa tsy lany andro hifanenjika fotsiny.
MyDago.com : Ny fifandanjan-kery no ady nataon’ny ankolafy . Tsy azonareo anefa ilay izy ka ampy hiadiana amin’ny fampanjakana ny tanjona ve izany?
Rakotoarimanana Joelisoa : Fantatra fa ny fifandanjan-kery ao anatin’ny fitondrana no niadiana tanteraka.Tokony ho fantatry ny vahoaka fa tsy mety io fizaran-tseza io, saingy hoentina hanehoana amin’ny vahoaka fa tsy sakana ho an’ny ankolafy telo, indrindra fa ny ankolafy Ravalomanana, amin’ny fitadiavana ny vahaolana izany. Ary ao no hita fa hevitra iray no entina, mba hahatanteraka ny zavatra kendrena, dia ny famoahana ny gadra politika sy ny fiverenan’ireo sesitany any ivelany, ary ny famohana ny haino aman-jery rehetra izay nakatona noho ny tsy fitovian-kevitra .Anjarantsika ny manohana ireo namantsika ireo sy ny fijerena izany .Tanterahina araka ny voalazan’ ny tondrozotra izany, ary efa hitan’izao tontolo izao isika fa manana finiavana ny hamaha izao krizy izao. Kanefa mbola tsy tanteraka ireo zava-kinendry, ka azontsika atao tsara ny mivoaka tao, mba ho hitan’izao tontolo izao sy ny Malagasy fa nandefitra mba hahitana ny vahaolana isika. Rehefa tsy mety dia mivoaha haingana fa aza mijanona ao.Manainga antsika vahoaka mba hanohana azy miditra ao ireo, fa efa hafa nenina isika.
MyDago.com : Tsy lasa kilalaon-jaza ve izany mivoaka miditra izany ?
Rakotoarimanana Joelisoa : Tsy hoe kilalaon-jaza akory fa misy fiteny izay manao hoe : “Tsy azo arahina amin’ny hadalany ny adala fa sao mihevitra ny tenany ho hendry”. Tsy mametraka ny fitondrana tetezamita ho adala akory fa ny ankolafy Ravalomanana dia mitady foana ny fandeferana mba hivahan’ny geja izay mahazo ny firenena .Mitady vahaolana tokoa ka tsy fanariana ny tanindrazana akory raha mivoaka ao fa ny ho avin’ny vahoaka 20 tapitrisa no jerena . Izay noantonyidirana ao anatin’io fitondrana io fa rehefa tsy izay dia miala no mahamety ireo niditra ao ireo .
Auteur Solo Razafy*Publié le 5 décembre 2011 Catégories Politique
2 pensées sur “Depioté Rakotoarimanana Joelisoa : tsy voatendry CT fa manohana ireo namany hatrany !”
Tokony hiala tao amin’izay ny ankolafy Ravalomanana fa mazava iny izao ny tenin’i Beriziky fa tsy hampody azy izao izany izy.tadidio ilay nifanaovana « Dina Menavozo » ry CT sy CST isany.Mialà koa ny ministres.
NANOME BAIKO NY PREZIDÀ HOE MIALÀ TAO AMIN’IZAY !!!!!
TSARA HO FANTATRY NY REHETRA IZANY, SATRIA HITANY ARY TSAPANY FA TSY MISY ZAVATRA AZO ANTENAINA AMIN’IREO MPANONGANA IREO RAHA NY HOAVIN’NY FIRENENA NO BANJININA !
FANDEFERANA MBOLA TSY NISY TOY NY NATAONY !!!!!!!!!
IL EST TEMPS DE DIRE : QUE TROP BON TROP CON !!!!
IL EST BON MAIS LOIN D’ÊTRE CON !!!! PEUPLE MALGACHE, ÊTES-VOUS TRÈS BON ????
Précédent Article précédent : Rajoelina à l’Elysée mercredi prochain
Suivant Article suivant : Kianjan’ny Magro Behoririka : Sahirana ireo CT